January 2020 – Medical Sharing
စာသင်ချိန်တိုးမြှင့်မှုကြောင့် ဓမ္မစကူးလ်များမဖွင့်နိုင်တော့သဖြင့် ကလေးများပိုမိုပျက်စီးမည်ဟုဆို….
January 31, 2020 Dr Mrs Mg
စာသင်ချိန်တိုးမြှင့်မှုကြောင့် ဓမ္မစကူးလ်များမဖွင့်နိုင်တော့သဖြင့် ကလေးများပိုမိုပျက်စီးမည်ဟုဆို….ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၃၀ မတ်လအထိ စာသင်ကာလတိုးမြှင့်သည့်အတွက် နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်နေကျဖြစ်သည့် နွေရာသီ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲ အကျိုးဆက်အဖြစ် ကလေးများ၏စိတ်ဓာတ်များ ပိုမိုပျက်စီးလွယ်မည်ဟု ဓမ္မစကူးလ်သင်တန်းများထံမှ သိရသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက အခြေခံပညာအတန်းများ၏ စာသင်ချိန်များနှင့် စာမေးပွဲကာလကို Read more
ဒီရောဂါတွေရှိရင် မြင်းခွါရွက်ပဲစားလိုက်ပါ မြင်းခွာရွက်က သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အထောက်အကူ ဖြစ်စေတာကို သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။မြင်းခွာရွက်ကို တစ်နေ့ (၃) ရွက်လောက် စားပေးခြင်းဖြင့် နုပျိုနေစေပြီး လိင်ကိစ္စမှာပါ အစွမ်းတက်စေပါတယ်။ မြင်းခွာရွက်ကို အရွက်သုပ်အဖြစ်၊ တို့စရာအဖြစ် စားတာအပြင် အရည်ညှစ်ပြီးလည်း သုံးနိုင်ပါသေးတယ်။ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး Read more
Mask တပ်ဆင်နည်းအမှားတွေပျံ့နှံ့နေလို့ တကယ့် Mask တပ်နည်းအစစ်ကဒီမှာပါ
Mask တပ်ဆင်နည်းအမှားတွေပျံ့နှံ့နေလို့ တကယ့် Mask တပ်နည်းအစစ်ကဒီမှာပါ ကျွန်တော်တို့ဟာ အအေးမိတဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် အနံ့ပြင်းတဲ့ အိမ်သုတ်ဆေးလိုဟာမျိုးကိုလုပ်ကိုင်ရမယ့် အခါမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် အနံ့ဆိုးတွေကို မရှူရှိူက်မိအောင် ၊ ဒါမှမဟုတ် လေထဲက ကူးစက်ရောဂါတွေကို မရှူရှိူက်မိစေဖို့အတွက် လမ်းဘေးဆေးဆိုင်ကနေ တစ်ခါသုံး Mask Read more
ကျောက်ကပ်ရောဂါဝေဒနာသည်များအတွက်…တပုံခြင်းစီကြည့်ပေးနော် ကျောက်ကပ်ဝေဒနာ သည် လွန်စွာ ခံရခက်သော ဝေဒနာဖြစ်ကြောင်း ခံစားရဖူး သူတိုင်း သိရှိပြီး ဖြစ် သည်။ ယာက်ျားတွင် ဆီး၊ မိန်းမ တွင် မီး ဟူသော စကားနှင့် အညီ အမျိုးသမီးများ အတွက် Read more
ရွေးကောက်ပွဲ၌ မိဘအရင်းကိုမရွေးဘဲ ပထွေးကို ရွေးမိလျှင် ဒုက္ခရောက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ(ငြိမ်း) ဦးသိန်းစိန်ပြော
January 31, 2020 January 31, 2020 Dr Mrs Mg
ရွေးကောက်ပွဲ၌ မိဘအရင်းကိုမရွေးဘဲ ပထွေးကို ရွေးမိလျှင် ဒုက္ခရောက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ(ငြိမ်း) ဦးသိန်းစိန်ပြော “ပထွေးကို မရွေးမိဖို့ ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကျင့်တရားကိုကြည့်ရမယ် ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းရဲ့ လား၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင် ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရဲ့လား” သမ္မတ(ငြိမ်း)ဦးသိန်းစိန် ဧရာဝတီတိုင်းကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်ရှိ ဒေသခံပြည်သူများမှ Read more
ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သံသယလူနာ ၁ ဦးတွေ့ရှိ
ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သံသယလူနာ ၁ ဦးတွေ့ရှိ တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်ကျိုးမြို့ကနေ ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ကို ဆိုက်ကပ်လာတဲ့ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တစီးပေါ်မှာ ဝူဟန်မြို့ကလာတဲ့ တရုတ်ခရီးသည်တဦး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါသံသယရှိတာကြောင့် စစ်ဆေးနေပါတယ်။ အဲဒီခရီးသည်ကို ဝေဘာဂီဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားပြီး လေယာဉ်ပေါ်ပါလာတဲ့ Read more
WHO က ဝူဟန်ရောဂါကိုနိုင်ငံတကာသို့အရေးပေါ် ကြော်ငြာ .. ( မူရင်းဘာသာပြန်အတိုင်းဖော်ပြသည် )
WHO က ဝူဟန်ရောဂါကိုနိုင်ငံတကာသို့အရေးပေါ် ကြေငြာ .. ( မူရင်းဘာသာပြန်အတိုင်းဖော်ပြသည် ) ဂျီနီဗာ – ၂၀၂၀ ဇန် ၃၁ ရက် ( ဝ၃:၉၅ ) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကြာသပတေးနေ့ ၊ ဇန်နဝါရီ ၃၀ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံမှကူးစက်ပြန့်ပွားနေသော coronavirus Read more
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ အတွက် အကြွေးတောင်းယတြာ
အကြွေးတောင်းယတြာ လက်လွန်ထားသောငွေများ ပြန်လည်တောင်းရန်ခက်နေသူများ အတွက်​- ကွမ်းရွက်သန့်သန် ၂ ရွက်ပေါ်မှာ ရစရာရှိတဲ့လူရဲ့နာမည်ရေး ငွေပြန်ပေးစေလို့ရေးပါ ။ ကွမ်းရွက်ပေါ်မှာ ချောကလက် ၂ တောင့် တစ်ရွက်တစ်တောင့်တင်ပါ ။ ပြီးရင် ကလပ်ပေါ်တင်ဆုတောင်းပါ ။ ကြွေးသွားတောင်းသောအခါမှာ ဘယ်ဘက်လက်ဖဝါးမှာ Read more
ဗိုင်းရပ်စ်သံသယကြောင့် အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှ လူ ၇,၀၀၀ ကို ဆင်းခွင့်မပေးဘဲ ပိတ်ပင်ထား ….
အီတလီမှာ ဗိုင်းရပ်စ်သံသယကြောင့် အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှ လူ ၇,၀၀၀ ကို ဆင်းခွင့်မပေးဘဲ ပိတ်ပင်ထား …. 30 January 2020 သင်္ဘောပေါ်မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ကိုယ်ပူပြီး နာမကျန်းဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အီတလီနိုင်ငံကို ဆိုက်ကပ်လာတဲ့ အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးတစ်စီးပေါ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံမှ Read more
Coronavirus ပိုး ဘယ်ကစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာ ၄၈ နာရီအတွင်းမှာစမ်းသပ်အဖြေပေါ်တော့မည်
ကဲ… Coronavirus ကူးစက်ပိုးစတင်ကူးစက်ပုံ ဘယ်ကစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာ နောက်နာရီပေါင်း ၄၈ နာရီအတွင်းမှာစမ်းသပ်အဖြေပေါ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်… ထိုင်း ၊ ကိုရီးယား ၊ ဂျပန်နှငိ့အခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ ပြည်သူများ အများဆုံးအသုံးပြုသည့် BTS မိုးပျံရထားတွေ ၊ မြေအောက်ရထားတွေ ၊ ဘူတာတွေကအစ လူအများအသုံးပြုသည့် Read more